डिजिटल युगमा युवा नेतृत्वका चुनौतीहरु : रामदिप आचार्य - Kantipath.com
मात्रै उनन्चालिस वर्षको छोटो आयु बाँचेर शहीद भएका चे ग्वेभाराको जीवनीले प्रभावित नगरेको सायदै कोही कम्युनिष्ट होला संसारमा । छत्तिस वर्षको उमेरमा संयुक्त राष्ट संघको सभालाई सम्बोधन गर्दै विभेदकारी लुटेरा पूँजीवादको बदला सच्चा समाजवादको पक्षमा वैचारिक झण्डा उचालेर संसारलाई अपिल गरेका थिए । चेले जहिले पनि हामीलाई अदम्य क्रान्तिकारी सहास र उच्च आशावादले ओतप्रोत जीवन बाँच्न प्रेरित गरिरहे । जसरी भारतमा गान्धीलाई सरलताको सगरमाथा भनेर चिनिन्छ उसैगरी भियतनाममा हो चि मिन्हलाई । अमेरिकाले हारेको महान् युद्धका नायक हुन् उनी । जनताबाट जे अभूतपूर्व विश्वास आर्जन गरे उनले सबै आफ्नो युवाकालमै गरेका थिए । छत्तिस वर्षको उमेरमै प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरियाको स्थापना गरिसकेका किम इल सुगंकाबारेमा त हामीहरु जानकार नै छौँ । उनका नाती अठ्तिस वर्षीय किम जोन उनले त विश्व पूँजीवादको लागि एटम बम जत्तिकै काम गरिरहेका छन् । भलै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बंश परम्परा कति सही होला । भर्खरै दक्षिण कोरियाको विपक्षि दलको प्रमुख नेतृत्वमा छत्तिस वर्षिय युवा निर्वाचित भएको समाचार शेयर गर्नेको कमि नेपालमा पनि छैन । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका एकजना चौबिस वर्षिय नायक भगतसिंहले जीवनकालमा जति चर्चा बटुले उनको शहादत्त पछि त्यो भन्दा कयौं गुणा बढी । भगतसिंहको फिल्म नहेर्ने को होला ?
युवा नेतृत्वले आजको दुनियाँमा नेतृत्व विकासको लागि के के गर्नु पर्ला ? पहिलो काम हो विचारको विकास । दृष्टिकोणको निर्माण । नेतृत्वले मूलतः नीतिको अगुवाई गर्ने हो । कस्तो नीति सही नीति हो भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि । नेतृत्वले समयको पदचाप बुझ्नु पर्दछ,र अगाडी अगाडी हिड्नु पर्दछ । जनता सँगसँगै तर अगाडी । जस्तो अहिले हामी डिजिटल युगमा छौँ । प्रविधिले मान्छेलाई विस्थापित गरिरहेको छ । कामको अन्त्य भइरहेको छ । रोबोटले विरामीको सल्यक्रिया गर्दछ, घरको नक्शा बनाउछ, बारीमा खेतिपाती गर्दछ, विद्यार्थीहरुलाई पढाउछ, कारखानामा जुत्ता उत्पादन गर्छ । डाक्टर, इञ्जिनियर, किसान, शिक्षक र मजदुरलाई विस्थापित गरिरहेको छ ।यसप्रति पीठ फर्काएर र ओठ लेब्य्राएर हिड्ने मान्छे मैले देखेको र भेटेको छु । अँ यस्तो त हुँदै गर्छ भन्ने । हुलाक कहाँ गयो आजकाल ?
के कसैले आराम छु आराम चहान्छु भनेर चिट्ठी लेखिरहेको छ ?इमेलले हुलाकलाई सर्लक्कै निलिसक्यो । इमेल उम्दा अवस्थामा छ भने हुलाक मृत्युको दिन गनेर बसिरहेको छ । ट्याक्टरले गोरु, राँगा र घोडाले जोत्ने खेतको हलो, फाली र जुवा उप्काउदै लगिरहेको छ ।तेलमिलले कोल र कुटानी मिलले पानी घट्ट निल्दै गइरहेको छ । कुनै दिन आउनेवाला छ , काँसको बञ्चरो, हाते चर्खा, हुलाक, हलो, कोल र घट्ट एकै ठाँउमा भेटिने वाला छन् अर्थात् संग्राहलयमा । अरु के के थन्कने छन् संग्राहलयमा हामीले सूचि बनाएका छौं ? अहिले सम्म वस्तु मात्रै थन्किएका थिए, अब मान्छेको पेशा पनि थन्कियो भने ? यही हो कामको अन्त्य भनेको ।के परिणाम आउला ?अकल्पनिय ।जिवाश्मा इन्धनको युग समाप्त हुँदैछ र नविकरणीय उर्जाको युग शुरु हुँदैछ । उर्जामा हुने क्रान्तिका बारेमा हाम्रोमा खासै बहश भएकै छैन । निःशुल्क उर्जाको परिणाम के होला ?
वस्तुहरु र मान्छेहरु इन्टरनेटमा जोडिन थालेका मात्रै होइनन् डिजिटल वस्तुहरु पनि बनेकै छन्, जस्तो डिजिटल मुद्रा । डिजिटल उपचार पद्धति, डिजिटल पढाई, डिजिटल व्यापार सबका सब । युवा नेतृत्व आजको दुनियाँका बारेमा कम्तिमा सैद्धान्तिक रुपमै भएपनि जानकार हुनैपर्दछ । ज्ञानमा आएको तीव्र बदलावले दश वर्ष पढेर जिन्दगीभर धान्ने जमाना समाप्त भयो । अब ज्ञानलाई क्षण क्षणमा नविकरण नगर्ने हो भने विस्थापित हुने संभावना प्रबल हुन्छ । नेतृत्वका लागि इच्छा राख्नु एउटा कुरा हो तर वास्तविक नेतृत्व गर्नु अर्को कुरा हो ।संक्षेपमा, डिजिटल युगको नेतृत्व डिजिटल युगको चेतनाले मात्रै हुन सक्दछ । त्यस्तो नेतृत्व एकल चेतनाले संभव छैन । सामूहिक नेतृत्व प्रणाली वस्तुगत आवश्कता बनेको छ र संभव पनि । जंगली युगमा शिकारीको सानो समूहको अगुवाई गरे पुग्थ्यो । कृषि कार्य विकेन्द्रीत भएकोले नेतृत्व विकेन्द्रीत थियो । औद्योगिक युगमा सयौँ वा हजारौँ मजदुरहरुलाई एकैसाथ नेतृत्व गर्न केन्द्रीकृत प्रणाली आवश्यक थियो । डिजिटल युगमा करोडौँ र अरबौँको संख्यामा तर सामूहिक नेतृत्व प्रणाली आवश्यक र संभव भएको छ । दोश्रो कुरा युवा नेतृत्वले नयाँ प्रयोगबाट डराउनु हुँदैन । तेश्रो कुरा, मानव जातिले थुप्रै असंभवलाई संभवमा बदलेको छ । नेतृत्व गर्न संभव छ । छलफल गराँै । अगाडीको बाटो तय गरौँ । भविष्य हाम्रो हातमा छ ।
केन्द्रीय सदस्य, नेकपा(माओवादी केन्द्र) , अध्यक्ष, समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठान
Previous Previous post: एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै
Next Next post: जनकपुर–जयनगर रेल सेवा यसै महिनाबाट